Shiinaha Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida, Soosaarayaasha, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd.
Guri > Boorsooyin > Boorsada isboortiga > Boorsada shaagagga shaagagga
Skates-ka waxaa loo sameeyaa jimicsi, taraatiga caadiga ah ama diskooga iyo qoob ka ciyaarka. (1) In kasta oo jawaannada qaarkood ay kaliya noqon karaan 100% naylon, qaar ka mid ah boorsooyinka waara waa kuwo xoog badan oo waara. Rip Stop iyo Denier waa weedho mudan in fiiro gaar ah loo yeesho maxaa yeelay waxay u dhigmayaan qalabka loo adeegsado tarabbada harada dhexdeeda waana kuwo aad loogu kalsoonaan karo. (2) Haddii shandadaada aad uga tagto qolka labiska ama safarka ganacsiga, haysashada alaab biyuhu ka soo baxaan Ka caawi sidii loo hubin lahaa inay gudaha qalalan yihiin. (3) Qeybta hoose ee la xoojiyay waa difaac dheeri ah oo ku jira salka bacda si kor loogu qaado cimri dhererkeeda. Bacda oo loo rogo bidix iyo midig waxay kordhin doontaa suurtagalnimada in sagxaddu marka hore soo muuqan doonto, sidaas darteed xoojinta bacda waxay ku dari doontaa xoogaa caymis ah.
Dongguan Zhihao Shandada Warshadaha Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2003 waana shirkad shiineys ah oo soo saarta bacaha. Ganacsigeena ugu weyn waa inaan qaabeyno, soo saarno oo iibino alaabada boorsada, sida: boorsooyinka laptop-ka, boorsooyinka ardayga, boorsooyinka shaati rullaluistemadka, boorsooyinka xafaayada, boorsooyinka lagu rido rullaluistemadka, boorsooyinka dibedda, boorsooyinka isboortiga, rucks, hal boorsooyinka garabka iyo waxyaabaha kale, iyo ayaa sidoo kale ballaarinaya ganacsiyada kale, sida naqshadeynta iyo soosaarka: bacaha dhexda, bacaha duffel, boorsooyinka gacanta, boorsooyinka qalabka, boorsooyinka qadada, boorsooyinka qoryaha, boorsooyinka taatikada ee militariga, boorsooyinka xayawaanka iyo waxyaabaha kale. Si loo daboolo baahiyaha shaqsiyeed ee macaamiisha, waxaan sidoo kale dhisnay waax ka caawisa macaamiisha inay helaan qaybaha kale ee badeecadaha ee Shiinaha. Shiinaha dhexdiisa, waxaan leenahay silsilad xoog leh oo qaan gaar ah oo kor u kacsan iyo silsilad saadka oo hoos mara Tani waa faa'iidadayada ugu muhiimsan. Faa'iidadan awgeed, waxaan ugu adeegi karnaa dhammaan macaamiisheenna si dhakhso leh, ka wanaagsan oo tayo fiican leh, waxaanna macaamiisheenna siin karnaa adeegga habeyn wax soo saar hufan, halka aan sidoo kale u bixin karno alaabteena tayada sare leh ee asalka ah macaamiisha iibka ah Shaqaalaheena 600 iyo 500 mashiinada wax soo saarka ayaa ah hantida ugu weyn. Sideen u ilaashan karnaa booskeena hogaaminta? Waxaan mudnaan siineynaa isku xirka dadka, waxaan mudnaanta siineynaa ilaalinta xuquuqda aadanaha ee shaqaalaha iyo xuquuqda macaamiisha. Aqoon isweydaarsiga 18,000 ee mitir murabac ah wuxuu noo ogolaanayaa inaan meel dhigno qalab badan oo wax soo saar iyo shaqaale soo saar. Baaxadda weyn waxay noo oggolaaneysaa inaan si dabacsan u geyno khadadka wax soo saarka si loo gaaro hadafka wax soo saar hufan. Waxaan siinaa macaamiisha adeegyo isku dhafan oo ka imanaya nashqadeynta wax soo saarka, soosaarka muunada, soosaarka tirada badan, saadka xamuulka, iyo bayaanka kastamka Haddii aad u baahato inaad habeyso alaabada boorsada ama aad metesho astaanteena, fadlan nala soo xiriir: (ku qor halkan emailka shirkadda, guji si aad wax uga beddesho emaylka)
1. Hordhac alaabada boorsada lagu rido ee shaagagga
Skates-ka waxaa loo sameeyay jimicsi, taraatiga caadiga ah ama diskooga iyo qoob ka ciyaarka.
(1) In kasta oo boorsooyinka qaarkood ay kaliya noqon karaan 100% naylon, qaar ka mid ah bacaha waara waa kuwo xoog badan oo waaraya. Rip Stop iyo Denier waa weedho mudan in fiiro gaar ah loo yeesho maxaa yeelay waxay u dhigmayaan qalabka loo isticmaalo trampoline-ka harada waana kuwo aad loogu kalsoonaan karo.
(2) Hadaad shandadaada uga tagto qolka labiska ama safar ganacsi, haysashada alaabooyin biyuhu ka soo horjeedaan ayaa kaa caawin doonta inaad hubiso in gudaha uu qalalan yahay.
(3) Qeybta hoose ee la xoojiyay waa difaac lagu daray salka bacda si kor loogu qaado cimri dhererkeeda. Bacda oo loo rogo bidix iyo midig waxay kordhin doontaa suurtagalnimada in sagxaddu marka hore soo muuqan doonto, sidaas darteed xoojinta bacda waxay ku dari doontaa xoogaa caymis ah.
(4) Qaab dhismeedka gudaha: Boorsooyinka qaar waxay noqon doonaan sedex geesood si loo waafajiyo kabahaaga khadadka tooska ah isla markaana loo helo goobo ku habboon koofiyaddaada iyo qalabkaaga. Haddii aad rabto meel bannaan, hubi inta jeebbo gudaha ah ee ku yaal. Qaar ka mid ah jeebabka gudaha ayaa loo qaabeyn doonaa si loo sugo koofiyaddaada, suufka ama qalabka kale. Goomaatada ka saareysa hawada / biyaha sidoo kale waa mid aad u wanaagsan. Dhididkaaga iyo kuleylka jirka awgood, tani waxay kaa caawineysaa inaad ka saarto qoyaanka iyo urta ku jirta bacda, waxayna ku buuxin kartaa boorsada hawo nadiif ah.
(5) Garabka garbaha: Maaddaama aad baari doontid dhammaan waxyaabahaan, waxaad u baahan doontaa hab raaxo leh oo aad ku shaqeyso. Xarkaha garbaha ayaa la hagaajin doonaa waxaana rajeynayaa in la duuduubay. Waxay kuxirantahay hadba intaad qorsheyneyso inaad baraf dhigto, tani waxay saameyn ku yeelan doontaa go'aankaaga. Laga soo bilaabo guriga ilaa gaariga, ilaa aad gaariga ku xirto, uma baahnid suun culus, laakiin haddii aad ku dhex meeraysato ciyaar ama hareeraha, waa inaad haysataa suun adag, adag oo adag. Shandadaha qaar waa qaab shandad leh, sidaa darteed waad u soo xirxiran kartaa sida shandadda oo waxaad ugu rogi kartaa meesha aad u socoto.
(6) In kasta oo waxyaabo badan oo bannaanka ka mid ahi ay la mid noqon karaan bacaha siligga lagu xidho, haddana weli waxaa jira kala duwanaansho mudan in la xuso. Sababtoo ah yaraanta boorsada, looma isticmaali karo oo keliya meel lagu kaydiyo shaashadda boorsada dhabarka, qalabka iyo suufka. Xaalado badan, boorsada barafka waxaa ku yaal meel barafka ka baxsan, sidaas darteed ma qabanayaan wax boos ah mana jirto meel lagu keydiyo koofiyadda, in kasta oo ay taasi naadir tahay. Gudaha boorsada waxay la mid noqon doontaa dhammaan boorsooyinka halkaas ku yaal. Halkani waa goob lagu keydiyo laptop-yada, agabka iskuulka, iwm.
2. Boorsada shaagagga shaagagga product parameters (specifications)
Dhererka 30cm X Ballaca 20cm X Dhererka 48cm
4. Xirxirida iyo rarka boorsada dhabarka lagu ordo
(2) Cabirka baakadka ee caadiga ah: dherer 30cm X ballac 20cm X dherer ah 48cm, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka naqshadeynta hadba baahidaada, si loo badbaadiyo xamuulka.
(3) faahfaahinta xirxirida: 32cm X 50cm X 50cm. 10PCS / kartoonka Waxyaabaha kartoonka: K = K 5-lakab warqad jiingado qaro weyn leh.
Q9. Muddo intee le'eg ayey tahay waqtiga hoggaaminta wax soo saarkaaga? Miyaad bixisaa shay-baarka? Ma bilaashbaa mise waa dheeri?
S10: Ma aqbashaa kormeerka dhinac saddexaad? Ma bixin kartaa warbixinno tijaabo ah? Sidee tayada wax soo saarkaagu yahay?
Q11. Qaab sheegis ah kee aqbashaa? Immisa maalmood ayaa muddada xigashada?
Calaamadaha kulul: Boorsada shaag duuban, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka